Studiare inglese in America (Informazioni su WESLI in Birmano) | WESLI Studiare inglese in America (Informazioni su WESLI in Birmano) – WESLI
Studiare inglese in America (Informazioni su WESLI in Birmano)
SCUOLA PROFILO ကျောင်း သ မိုင်း အကျ ဉ်း
WESLI တွင် နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ခန့်မှ ကျောင်းသား ၁၈၀ခန့်တက်ရောက်လျှက်ရှိကြသည်။ WESLI တွင် တက်ရောက်လိုသော ကျောင်းသားတိုင်းအတွက် လေဆိပ်တွင် လာရောက်ကြိုပေးခြင်း၊ နေထိုင်ရန် ကူညီပေးခြင်း နှင့် တက္ကသိုလ်တက်ရောက်ရန် ဆွေးနွေးအကြံပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးနေပါသည်။ WESLI ကို State of Wisconsin Educational Approval Board မှ တရားဝင်လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီး American Association of Intensive English Programs (AAIEP) ၏ အ သင်း0င်ြ ဖစ် သ ည့်IL မှ တရား0င်အသိအ မှတ်ြ ပု ထား သော ကျောင်း တစ် ကျောင်းြ ဖစ် ကာြ ပည် နယ် ဥပေ ဒနှင့်အ ညီ အေ မ ရိ ကန် တွင် ကျောင်း တက် လိုေ သာ ကျောင်း သား များကို သာ0င်ခွ င့်ြ ပုေ သာ ကျောင်းြ ဖစ် သည်. အေ သး စိတ် သိ ရှိ လိုပါက WESLI ၏0က်ဘ်ဆိုက် လိပ် စာ www.wesli.com0si può accedere.
Avere un sicuro, desiderabile Bellaedivertente
CLASSI & PROGRAMMA: E gli elenchi di classe
WESLI il livello base della lingua inglese nelle scuole professionali0può livello 8 insegnamento su due livelli. (WESLI naturalmente,apagina6del campione0sul sito "lista dell'anno accademico dell'università di quest'anno(Lista corso della sessione corrente)” တွင်လည်းကောင်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။) အတန်းတစ်တန်းလျှင် ပျှမ်းမျှ ကျောင်းသား၉ဦးသာ လက်ခံလေ့ရှိပြီး WESLI တွင်တက်ရောက်ရန် ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည်ဖြစ်သည်။တက်ရမည့် စာသင်ကာလ တစ်ခုလျှင် နှစ်လကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး အချိန်ပြည့်ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ကျောင်းတက်ချိန် တစ်ပတ်လျှင် ၁၈နာရီမှ ၂၂နာရီ၊ အိမ်စာအတွက် တစ်ပတ်လျှင် ၁၀နာရီမှ ၁၅နာရီခန့် သင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ပညာသင်ကာလတစ်ခုပြီးလျှင် ဆက်လက်တက်ရောက်လိုသော ကျောင်းသားများသည် မိမိ တက်ရောက်ရမည့် သင်တန်းကာလ အတွက် ကြိုတင်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်ထားရမည့်အချိန်နှင့် ပညာသင်စားရိတ်ကို ကျောင်းလျှောက်လွှာ (သို့) ၀က်ဆိုက်ပေါ်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
OVERSEAS CONDITIONAL ADMISSION (PADRE): ပြည်ပကျောင်းသား ခြွင်းချက်ဝင်ခွင့် (အိုစီအေ)